Izinto ezenzeka kwiLizwe leNdalo
Kukho izinto ezili-118 ezikhoyo kwiphepha lexesha elikhoyo . Izinto ezininzi zifunyenwe kuphela kwii-laboratories nakwi-accelerators enyukliya. Ngoko, unokuzibuza ukuba zingaphi izinto ezifumanekayo ngokwemvelo.
Impendulo yesifundo esiqhelekileyo i-91. Iingcali zenzululwazi zasebenzisa ukukholelwa ukuba, ngaphandle kwezinto zetekntium , zonke izixhobo ukuya kwisiqendu 92 ( uranium ) zingafumaneka kwindalo.
Nangona kunjalo, kuvela ukuba kukho ezinye izinto ezenzeka ngokulandelelana ngokwemvelo.
Oku kuzisa inani lezinto eziqhelekileyo ezenzeka kwi-98.
I-Technetium yenye yezinto ezintsha ezongeziweyo kwoluhlu. I-Technetium yinto engenazo iisotop ezizinzile . Iveliswa ngokuchanekileyo ngamatampu e-bombarding e- molybdenum ene-neutron ekusebenziseni ezoshishino kunye nezenzululwazi kwaye yayikholelwa ngokubanzi ukuba ayikho emvelweni. Oku kuye kwaba yinyani. I-Technetium-99 inokuveliswa xa i-uranium-235 okanye i-uranium-238 iqhutshwa. Inani elifutshane le-technetium-99 lifunyenwe kwi-pitchblende ene-uranium.
Izinto ezise-93-98 ( neptunium , plutonium , americium , curium , berkelium , kunye ne- californium ) zizonke zahlanganiswa ngokuzenzekelayo kwaye zixhomekeke kwiLebhu yeBerkeley Radiation Laboratory yaseYunivesithi yaseCalifornia. Zonke zifunyenwe ekuhlakalweni kokuvavanywa kwamandla enyukliya kunye nemveliso ye-nyukliya kwaye zazikholelwa ukuba zikhona kuphela kwiifom ezenziwe ngabantu.
Oku kwavela ukuba akuyiyo inyaniso. Zonke ezithandathu zezi zinto zifunyenwe kwixabiso elincinci kwiisampulu ze-uranium-rich pitbbende.
Mhlawumbi ngelinye ilanga, iisampula zamanani eempawu ezingaphezu kwe-98 ziya kuchongwa.
Uluhlu lwezinto ezenziwe kwiNdalo
Izinto ezitholakala kwimvelo zizinto ezinama-atomic 1 (i-hydrogen) ukuya kwi-98 (i-californium).
Ezilishumi zezi zinto zivela kwiimali ezilandelayo: i-technetium (inombolo 43), i-promethium (inombolo 61), i-astatine (inombolo 85), i-francium (inombolo 87), i-neptunium (inombolo 93), iputonium (inombolo 94), i-americium (inombolo 95) , curium (inombolo 96), berkelium (inombolo 97), kunye ne-californium (inombolo 98).
Izinto ezinqabileyo ziveliswa yimiphumo ye-radioactive kunye nezinye iinkqubo zenyukliya zezinto eziqhelekileyo. Ngokomzekelo, i-francium itholakala kwi-pitchblende njengenjongo yokubola kwe-alpha ye-actinium. Ezinye izinto ezifunyenweyo namhlanje zingabonakaliswa kukubola kwezinto eziphambili, eziyizinto eziveliswe ngaphambili kwimbali yendalo yonke eyasusela.
Eative Element vs Natural Element
Nangona iimeko ezininzi zivela kwendalo, zingenakwenzeka kwifomu ehlambulukileyo okanye yasekuhlaleni. Enyanisweni, zikhona ezimbalwa izakhi zomthonyama. Ezi ziquka amagesi ahloniphekileyo, angakhange avelise amaqumrhu, ngoko ke ayenzizinto ezicocekileyo. Ezinye zeesinyithi zivela kwifom yangomthonyama, kuquka negolide, isilivere kunye nobhedu. Ama-nonmetals kuquka i-carbon, i-nitrogen kunye ne-oksijini zivela kwifom yangomthonyama. Izinto ezenzeka ngokwemvelo, kodwa kungengowomthonyama, zibandakanya izinyithi ze-alkali, umhlaba we-alkaline, kunye nezinto ezinqabileyo zomhlaba. Ezi zinto zifunyanwe ziboshwe kwiimveliso zamakhemikhali, kungekho kwifomu ecocekileyo.
Ziziphi Izakhiwo Ezibizwa Ngabantu?
Yiyiphi i-Element Electronegative Element?
Americium Facts - Element 95 okanye Am
IAlfabhethi yesiGrike kwiKhemistry
Ziyifumene njani Izinto Ezintsha?
Nitrogen Family of Elements
Iimvumi ezixhamlayo kunye neeNcwadi zesiNgesi
Iyintoni "iHammer Spur" kwiSibhamu okanye kwiGund?
Ukwenza inkqubo yoKhuseleko lokuThuthukiswa kweSithuthuthu
Abafazi kwiMbali yeMathematika
Iipolisi zePolyhola: Iibhola zeTeatball zitshintsha
Indlela Yokuva I-Beat of Music
Ukwakha iString Connection String Ngokukhawuleza ngexesha lokuqalisa
Indlela yokudibanisa isenzi sesiFrentshi "Isivumelwano" (ukuvuma)
Ukuxilongwa kweNyathelo-ngeNyathelo ye-'Applaudir '(ukukhaluma, ukuwa)
Imbali yeeViksi ezixhaswe ngeStam
ULucius Quinctius Cincinnatus
Ukutya kweNja yeNtengo kunye neKapa
I-French Revolution: I-Pre-Revolutionary France
Quotes Winston Churchill Quotes
Intsingiselo ye "Ifomu ilandelela ukusebenza"
Iinjongo zoKwenziwa kweNkqubo yokuLungulwa kweNkqubo ye-IEP
Iisundu kunye nePisces Uthando olufanelekileyo
Imibuzo yovavanyo lweGesi efanelekileyo
Gcwalisa uluhlu lwee-Naruto Anime amaDVD